Félix Lope de Vega, nei "El fénix de los ingenios"? | Zvazvino Zvinyorwa
Lope De Vega, nei "Iyo phoenix yezvigayo"?
John Ortiz | | Vanyori, Type, Theater
Lope de Vega, «Iyo phoenix yezvigayo».
Kunzwa kubva pamiromo yevanyori vakuru vekare kuti Felix Lope de Vega ndiye "the phoenix weungwaru" anosiya anopfuura mumwe achifunga. Uyu Madrid akazvarwa muna 1562 akawana iro zita remadunhurirwa rekugona kwake kunyora. Iye anga asati apedza kuita basa, apo anga atove nemusoro wevamwe vashanu mupfungwa, sehunhu, hwakadzama, sekungwara.
Lope de Vega aiziva kukwiza mafudzi nevanyori vakanakisa venguva, achive chimwe chezvivheneko zvakakosha zveSpanish Golden Age. Unyanzvi hwake hwekunyora hwaifamba kuburikidza nemadhirama ane hunyoro hwakafanana newemudetembo, kutaura chokwadi, pakanga pasina runyorwa rwemhando rwakamuremera kufunga; munyori ainyatsoziva zvaaiita uye kuti aizviita sei. Haana kudya pasina pakutengesa kwake, mambure ake anorumbidzwa uye mazana nhasi vanotaura nezve nyasha dzake.
Uye zvakajeka, ndiani ane chikwereti zita remadunhurirwa rekuti "Iyo phoenix yezvigayo"?
Nhoroondo yemunhu inowanzo zara nematambudziko akakura. Imwe yeiyi yaive yekuita vaviri vevanonyanya kukosha vanyori veSpanish mutauro unowirirana muhupenyu munzvimbo imwechete nenguva. Zvinoitika kuti Miguel de Cervantes y Saavedra aisango gara munyika imwechete saLope de Vega, asi vaivewo vagari vemunharaunda imwechete, uye vese, pakutanga, vaive nekuyemura kukuru kwebasa ravo.
Yaive Cervantes, akashamiswa zvikuru nehunyanzvi hwaLope hwekunyora uye hwekuita, uyo akamudana "monster yezvakasikwa" uye "phoenix yehungwaru." Makore akafamba uye ndizvo zvakaitawo mukurumbira Lope de Vega, mutambi wemitambo, murume wemakomiki, muteveri anoshingairira uye anoyemura basa raVicente Espinel, anofa asina kufa nepeni yake yakajeka.
Kubva parudo kusvika paruvengo pakati peLope de Vega neCervantes
Hupenyu hunotora kutora mativi mazhinji, chero anokurumbidza nhasi, mangwana, pamwe, kutsvaga kukuparadza, haina kusiyana pakati pemakuru. Ichokwadi ndechekuti mushure mekugara pamwe chete mumisangano yese yemagariro nekurumbidza mumwe kune mumwe mabasa avo, Lope de Vega naCervantes vakasangana. Kana tikataura nezvezvikanganiso pakutanga kwekukonana, nhoroondo inopa dzakawanda dzidziso.
Kuna Kesari zviri zvaKesari, ngative pachena. Munguva yeGolden Age kubwinya kwese, nekuda kwemakomedhi ake uye nekushandisa kwakanaka kwemutauro (padyo, wakajeka, chaiye uye kwete kure kure) Zvichakadaro, Cervantes haina kunzwisiswa zvizere. Uye hazvisi izvo El maco de Lepanto (sekutaura kwavo kumusiki we Quijote) yakanga isina hunhu, sezvazviri, uye yakawanda, asi yakanga isiri nguva yake yekupenya. Izvo, sekureva kwevazhinji vadzidzi nezvenyaya iyi, yakarova ego yaCervantes. Ipapo iyo-yakashongedzwa neLepanto yakabuda yose ichipesana nePenieni, uye iyo Phoenix, zvakare, yakapindura.
Kuchera uku neparutivi kwaive nekukurumidza, uye zvimwe zvese nhoroondo yakapfuura. Zvisinei, nhasi mazwi ake anokanganisa maitiro akadaro, achisiya iro basa, zvirevo uye dzidziso zvekunakidzwa uye kukura kwevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Lope De Vega, nei "Iyo phoenix yezvigayo"?